China ejima conical extruder mmepụta na Factory |Jiahao
Ụdị ihe ọ bụla nke JHZ extruders nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta karịsịa maka ịmepụta profaịlụ PVC / WPC na ọkpọkọ PVC na ọbụna plasticity, àgwà kwụ ọtọ, mmepụta dị elu, ngwa ngwa na ogologo oge.Conical ejima ịghasa extruder Igwe nwere nhọrọ abụọ na njikwa mita nkịtị na sistemụ njikwa kọmputa yana nhọrọ abụọ maka sistemụ moto DC na AC.
Ihe ejima ejima conical extruder njirimara bụ isi:
Ụdị ihe ọ bụla nke JHZ extruders nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta karịsịa maka ịmepụta profaịlụ PVC / WPC na ọkpọkọ PVC na ọbụna plasticity, àgwà kwụ ọtọ, mmepụta dị elu, ngwa ngwa na ogologo oge.Igwe ejima ejima conical nwere nhọrọ abụọ na njikwa mita nkịtị yana sistemụ njikwa kọmputa yana nhọrọ abụọ maka sistemụ moto DC na AC.
Conical ejima ịghasa extruder bụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma ngwakọta na extrusion akụrụngwa.Igwe ahụ nwere njirimara nke obere nha nha, nbibi siri ike nke ihe, plasticization edo na ngwakọta, ịdị mma kwụsiri ike, mmepụta dị elu, oke ngwa ngwa na ogologo ndụ ọrụ.
Sistemụ ikuku dị elu na obere mkpọtụ, sistemu ikuku nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị irè, nkenke dị elu, ụkpụrụ oke ọsọ, sistemu inye nri nke mmanye, igbe nkesa nkesa oke arụmọrụ dị elu, sistemu njikwa ọkụ zuru oke zuru oke, sistemụ njikwa ọsọ ọsọ ziri ezi na kwụsie ike.
The conical ejima-ịghasa extruder e ji edo plasticizing Ịgwakọta, elu mmepụta, kwụsiri ike mma, wide adaptability, ogologo ndụ ndụ na kpọmkwem ịkpụzi nke PVC ntụ ntụ.Site na isi ịkpụzi kwekọrọ ekwekọ, ebu na igwe inyeaka, ụdị thermoplastics niile, ọkachasị ntụ ntụ PVC, nwere ike ịpụta ozugbo n'ime ngwaahịa rọba dị ka ọkpọkọ, efere, mpempe akwụkwọ, mkpanaka, ihe nkiri na profaịlụ, yana mgbanwe nke ụdị plastik niile. usoro granulation nke ntụ ntụ nwekwara ike mechaa.
The conical ejima-skru extruder nwere ike ịrụ ọrụ, nke nwere ike ime ka gbazee plasticize na extrude ọma na obere okpomọkụ.Ejiri gbọmgbọm ahụ nwere ihe nkedo aluminom, nke nwere arụmọrụ ọkụ dị elu, mmụba ngwa ngwa na otu ọnọdụ okpomọkụ, ma nweekwa fan jụrụ oyi.
Akụkụ mbufe a haziri ahazi na-anabata ụdị moto nke agbanwe agbanwe ma ọ bụ moto ugbu a ozugbo, na-arụ ọrụ dị nro, nnukwu ikike nnyefe na arụmọrụ dị elu.Ihe ntụgharị ugboro ole a na-ebubata ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọsọ DC nwere ike nweta usoro ọsọ ọsọ na-enweghị nkwụsị na kwụsiri ike, nkenke dị elu na nchekwa ike.N'ịnabata ihe njikwa ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nwere ọgụgụ isi, ọ nwere njikwa njikwa dị elu yana obere mgbanwe okpomọkụ.Ejiri ya na nchedo oke ibu na mkpu mmejọ, ọnọdụ okpomọkụ nke mgbasa mmanụ screw, ntụ oyi mmanụ gbọmgbọm na ọrụ ndị ọzọ, yana ngwaọrụ ikuku iyuzucha na ngwaọrụ nri.
Nhazi kacha mma na nke a na-eme nke ọma na skru na barrel rụpụtara ezigbo plasticity
Sistemụ njikwa ọkụ eletrik dị elu, mkpu ọdịda nke ngalaba, dị mfe maka agbapụ nsogbu
Usoro nkesa arụmọrụ dị elu maka nkwụsịtụ ike na-eme ka ịdịte aka na mfe maka mmezi
Usoro njikwa okpomọkụ zuru oke na nke ziri ezi na-eme ka mmepụta na-aga n'ihu
Nlereanya JHZ45/90 JHZ51/105 JHZ55/110 JHZ65/132 JHZ80/156 JHZ92/188
Ike nke moto (kw) 15 18.5 22 37 55/75 110
Dayameta ịghasa (mm) Φ45 / 90 Φ51 / Φ105 Φ55 / Φ110 Φ65 / Φ132 Φ80 / Φ156 Φ92 / Φ188
Mba nke ịghasa 2 2 2 2 2 2
Ọsọ ntụgharị (NM) 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
Torsional oge nke ịghasa 3148 6000 7000 10000 14000 32000
Ike PVC, ntụ ntụ (kg / h) 60 80 120 220 350 600
Central elu 1000 1000 1000 1000 1100 1200
Akụkụ 3360x1290x2127 3360x1290x2127 3620x1050x2157 3715x1520x2450 4750x1550x2460 6725x1550x2814
Q1: ị bụ ụlọ ọrụ igwe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ WPC / SPC pelletizing akara igwe emeputa / factory.
Q2: Ebee ka factory gị dị?
A: Anyị nwere abụọ factory nke dị na Shanghai na Anhui.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ileta ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-eburu gị n'ọdụ ụgbọ elu.
Q3: ole afọ akwụkwọ ikike? Ị nwere ike ịkụziri anyị?
A: Akwụkwọ ikike ọnwa 12 maka akụkụ igwe, akwụkwọ ikike ọnwa 6 maka akụkụ eletriki,
na ọrụ ndozi akụrụngwa maka ndụ.
Q4: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ?
A: T/T, L/C, Western Union, wdg.
Q5: Ị nwere ọrụ ndị ọzọ gbasara ngwaahịa gị?
A: Anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ na-arụ ọrụ na nkọwa maka ndị ahịa anyị,
anyị nwekwara usoro ọrụ a kapịrị ọnụ.
Q6: Olee otú ị na-eme nhota maka ahịa?
A: Ọnụahịa ahụ dabere na ịdị mma na arụmọrụ mana ndị ahịa kwesịrị inwe afọ ojuju mbụ.
Nke gara aga: Otu ịghasa extruder
Osote: Ejima Parallel extruder